अत्यधिक चिसोले हुम्लामा पानीको धारामा बरफ जम्न थाल्यो - नेपाली खोज
१२ बजे राति चि,हान खनेर मान्छे निकाल्दा जंगलमा किन ल,फडा पर्यो ? झाक्रीले भाबुक हुदै गरे यस्तो कुरा (भिडियो सहित)
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन सक्दैन ? भन्दै प्रधानन्याधिशले यस्तो भने, हेर्नुहोस माघ ८ गतेका मुख्य
अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनले लिनुभयो सपथ, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प फ्लोरिडामा
सिमकोट, २४ कात्तिक: हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सामा चिसोले पानीको धारामा बरफ जम्न थालेको छ । कात्तिक महिनाको दोस्रो सातादेखि हुम्लामा चिसो बढ्न थालेपछि हिल्सामा जम्मा गरेर राखेको पानी बरफ हुन थालेको हो ।
रातिको समयमा अत्यधिक चिसो हुने भएकाले धारामा बिहानको समयमा बरफ जम्न थालेको छ । बाल्टिनलगायत अन्य सामग्रीमा जम्मा गरेर राखेको पानीसमेत जमेर बरफ हुनथालेको सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल हुम्लाका प्रहरी निरीक्षक तथा बिओपी हिल्साका प्रमुख सुरज केसीले जानकारी दिनुभयो । यहाँको तापक्रम माइनसमा झरेकाले खानेपानीका धारामै बरफ जमेको छ ।
दिउँसो घाम लागेपछि मात्रै जमेको पानी बिलाउने गरेको हो । हिल्सामा होटल व्यवसायी कोही नभए पनि सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी रहँदै आएको केसीले जानकारी दिनुभयो । चिसो बढ्दै गएपछि हिल्सा प्रहरी चौकीले मङ्सिर पहिलो सातातिर सिमकोट सर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल प्रहरीको टोली जिल्ला फिर्ता भए पनि सशस्त्र प्रहरी हिउँदको समयमा पनि हिल्सामै रहने छ । मङ्सिर लागेसँगै हिल्सा, लिमीलगायतका उच्च क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकी जिल्ला सदरमुकामतिर सर्ने गरेका छन् ।
हिल्सामा बिओपी स्थापना भएसँगै यो वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बल बाह्रै महिना सीमा सुरक्षामा खटिने भएको छ । पुस र माघ दुई महिना हुम्लामा अतधिक हिमपात हुनुका साथै तापक्रम माइनस १५ डिग्रीभन्दा बढी हुने गर्दछ । तापक्रम माइनसमा झरेसँगै चिसो बढेकाले पानीका धारामै बरफ जम्न थालेको हो । (रासस)
बैदाम प्रहरीमा महिला इन्चार्ज : सुरक्षा चुनौती सम्हाल्दै
लटरम्म गोलभेडा फलेपछि कृषक पाण्डे दङ्ग
कपाल फुल्नबाट जोगाउँनुका साथै फोक्सोसँग सम्बन्धित रोगहरु लाग्न दिँदैन अमलाले, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु
उखुको जुस सेवन गर्नुपूर्व यि महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुहोस